Diatomite Fasalka Cuntada, Khamriga Diatomite, Shiinaha Diatomite Powder - Yuantong
Macdanta Diatomite, wax soo saarka, iibka, cilmi baarista iyo horumarka
diatomaceous diatomite siili ...
Jilin Yuantong Macdanta Co., Ltd. oo ku taal Baishan, Gobolka Jiling, oo ah meesha ugu sarreysa diatomite ee Shiinaha xitaa Aasiya, waxay leedahay 10 hoosaad, 25km2 aagga macdanta, 54 km2 aagga sahaminta, in ka badan 100 milyan oo tan oo diatomite ah keyd taas oo ka dhigan in ka badan 75% dhammaan keydka Shiinaha ee la xaqiijiyay. Waxaan haynaa 14 khadadka wax soo saarka ee diatomite kala duwan, oo leh awood wax soo saar sanadle ah oo ka badan 150,000 tan.
Miinooyinka diatomite ee heerka ugu sareeya iyo tikniyoolajiyadda waxsoosaarka ee horumarsan leh shatiga.
Had iyo jeer u hoggaansanaanta ujeedada "macaamilka ugu horreeya", waxaan si xamaasad leh u siineynaa macaamiisha badeecado tayo wanaagsan leh adeeg ku habboon oo feker leh iyo talo farsamo.
Xarunta Teknolojiyada ee Jilin Yuantong Mineral Co., Ltd. hadda waxay leedahay 42 shaqaale, waxayna leedahay 18 farsamo yaqaanno xirfadlayaal ah oo ku hawlan horumarinta iyo cilmi baarista dhulka diatomaceous
Intaa waxaa dheer, waxaan helnay ISO 9 0 0 0, Xalaal, Kosher, nidaamka maaraynta badbaadada cuntada, nidaamka maaraynta tayada, shahaadooyinka liisanka wax soo saarka cuntada.
Shiinaha iyo Aasiya waxay leeyihiin kaydka ugu weyn ee soo saarayaasha diatomite kala duwan
Soo saaraha ugu horreeya ee diatomite ee Shiinaha.
In kabadan wax soo saar sanadle ah
saamiga suuqa ayaa ka badan in 60%
Tikniyoolajiyadda ugu horumarsan, saamiga ugu sarreeya suuqa
Shirka "2020 China Non-Metallic Mineral Mineral Conference and Exhibition Expo" oo ay soo qabanqaabiyeen Ururka Warshadaha Macdanta ee aan macdanta lahayn ayaa si weyn loogu qabtay magaalada Zhengzhou, Henan intii u dhaxeysay 11-kii ilaa 12-kii Noofembar.
Jilin Yuantong Macdanta Co., Ltd. ka qayb ...
Gacmaha is qabsada si loogu guuleysto dagaalka ka dhanka ah epid ...